FX Izinzuzo Over Amasheya Nama-Futures - Kuhle Forex EA sika | Isazi Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolFX Izinzuzo Over Amasheya Nama-Futures
& zezimali emakethe Largest futhi uketshezi kakhulu emhlabeni Zezimali sincike umthamo isitokwe nsuku zonke Zezimali sincike inyanga inkontileka adayiswa
Ukwenza Speed Ubuncane slippage & oda amaphutha zezimali Ngaphansi, igumbi esengeziwe slippage nesiphambeko zezimali Ngaphansi, igumbi esengeziwe slippage nesiphambeko
Amahora Ukusebenza 24-ihora ukuhweba isinyathelo izinsuku 5.5 ngesonto kwamahora angaphansi kwangu 7 ukuhweba isikhathi ngelanga kwamahora angaphansi kwangu 7 ukuhweba isikhathi ngelanga
Izindleko Kungaba ukusabalala ongaphakeme futhi akukho ikhomishana ngazimbili eziningi kusukela $ 3 (I-elekthronikhi) ukuze $ 10-30 (bonke abanye) kusuka ku-$ 5 (yekhompyutha) kuya ku-$ 15- $ 50 (bonke abanye)
Long / iDemo
Ukuvumelana nezimo Singazuza kuyo yomibili inkunzi kanye nebhere izimakethe Abantu abaningi bathenga amasheya esikhundleni iDemo ukuthengisa Bavame ukuba ezinde bearish
Imikhawulo Can dlala iDemo-ukuthengisa noma kunini Imikhawulo abanye abahwebi & amasheya Ukuhweba kunqandwe umkhawulo phansi / phezulu umthetho
Thola Ngo-US, 50: 1; kwenye indawo kusukela 50: 1 ukuba njengoba eliphezulu 1000: 1 kuze kufinyelele 2: asizakale 1 kuze kufinyelele 30: asizakale 1
Izidingo Small imiz evulekile & wekhasi, ngokuvamile: $ 50 ngoba micro $ 500 ama-akhawunti mini Udinga> $ 500 ama-akhawunti yemali; > $ 2000 ngoba wekhasi akhawunti Vula> $ 4000
Nezimo of Isikhundla Sizing Isimo se-Flexible sizing: 0.01 (10 cents / pip) kuya ku-0.1 ($ 1 / pip) kuya ku-1 ($ 10 / pip) engaguquki isikhundla Sizing: 100 + ukwabelana, iphindwe ukubaluleka isitokwe isikhundla engaguquki sizing: 1 inkontileka = fixed & engase phezu-leveraged zokuhweba
Ake sibheke izinzuzo ngenhla kancane ngokuningiliziwe.
The Forex emakethe ine inzuzo obuqand phezu kwezinye izimakethe ngokuya zezimali: futhi kulinganiselwa nsuku ukuhweba ivolumu phezu 4 izindodla zezimali, kuba 100 izikhathi kunangendlela zonke isitokwe-Ukuhwebelana kuhlanganiswe phezu. Zikhona izinzuzo ezintathu ezinkulu laniketwe enjalo zezimali okukhulu:
Trade nokubulawa kukhona leso;
Inani ngokuqiniseka etholwe nge slippage kancane kakhulu;
Ngenxa yesikhulumi yayo zezimali ezinkulu inthanethi-based (akukho Ukuhwebelana, akukho imigodi evulekile-ukukhala, akukho wabathengi phansi), okusheshayo myalo futhi osheshayo yokugcwalisa isiqinisekiso kukhona into eyodwa njalo. Kungase kudingeke yomqondo slippage uma you hweba ngesikhathi izimemezelo izindaba noma uma ukudayisa ivolumu ephezulu, kodwa ngokuvamile ungakwazi akhiphe wonke amanani ku sakho broker platform ngesikhathi zibekwa. wabathengi Iningi ukunikeza ukuhweba nokubulawa leso kusukela izingcaphuno sangempela. Ezinye esitokisini zithandwa kakhulu futhi zitholakala ikusasa baye bathuthela ezisekelweni ngogesi kanye Ukuhwebelana, okuyinto ukwandisa kakhulu yabo ngesivinini ukubulawa, kodwa zisatholakala sengozini ekushintshashintsheni amadlingozi zezimali ngosuku abo Ukuhweba kulo futhi slippage ligcwale ngokwengxenye zivamile.
Esitokisini futhi ikusasa, kukhona amathuba iqhaza elikhulu engenile noma sandise kude, okubangela emakethe iyokumba eqolo noma yokukhubazeka. Isibonelo yamuva iqhaza elikhulu sandise kude ezimakethe zamasheya kwaba "flash ukuphahlazeka" ngoLwesine, Meyi 6, 2010, lapho ephezulu Frequency (hf) abahwebi uphumile futhi zezimali wanyamalala. Le ngozi yathatha imizuzu embalwa, kanye Dow Jones falling 1000 amaphuzu (kekulu wosuku olulodwa iphuzu ukwehla DJ umlando) ngaphambi oshaya emuva kwesikhathi ntambama. Isibonelo yamuva iqhaza elikhulu engenile kuya ikusasa lezimakethe lokuxhaphaza ke eyingozi phezulu kwaba 2008 "ukudla bubble": Goldman Sachs (futhi Lezimpahla Inkomba yayo emisha ukufuya kanye Leveraging imali zokucabangela) awusibekela supply langempela uphoqe kakolweni ngamakhulu izigidi zezigidi zamaRandi entsha, udala virtual "funa ukushaqeka" lapho kwakukuningi kagesi (2008 kwaba sokuvuna bumper sithole ukolo), okuyinto waxosha intengo kakolweni nezinye ukudla impahla 80% kuya amazinga angakaze abonwe, okwenza Goldman futhi ezimbalwa kakade zimali ocebile acebile ngezithukuthuku amagugu emhlabeni wangempela ukudla enziwa Hyper-ezibizayo for abampofu, isusa nezibhelu ukudla emhlabeni emazweni angaphezu kuka amathathu nokukhuphula kwababusi ulambile kwezigidi ezingu 250 ngomnyaka owodwa (I Ukudla Bubble).
Ngenxa zezimali omkhulu Forex, akukho ibhizinisi has usayizi dollar ukuhambisa emakethe noma phezulu noma phansi, njalo intengo zokukhwabanisa kunalokho non-akukho. Nokho, izenzo kuhlanganiswe kungenzeka lapho eziningana abahlanganyeli ezinkulu, ezifana namabhange central, ukuphoqelela emakethe indlela ethile, kodwa lokhu kuyinto okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho. Ezweni esitokisini, zikhona izikhathi eziningi lapho abahlanganyeli enkulu esebenza ekhonsathini kungaba ukudayisa phezulu noma phansi emakethe umusa, futhi kukhona izikhathi lapho abahlanganyeli kungaba isinyathelo ngokungemthetho noma amorally lokuxhaphaza amasheya ezithile: amachibi obumba, abathengisa ukuphehla, ukudala amahemuhemu siphela, ramping emakethe, ukugeza abathengisa nokwakha bear kuphangwa.
24 zamahora angu-Global Trading Advantage
Ngo Forex, kukhona ithuba ukudayisa ubusuku nemini, amahora 24 ngosuku ngaphandle ngezimpelasonto okungukuthi ngidayisa kusukela 20: 15 GMT ngeSonto kuze 22: 00 GMT NgoLwesihlanu. Lokhu ukuhweba-ihora 24 kungenzeka ngoba izimakethe emhlabeni ivula futhi ngezinye izikhathi ezahlukene:
Tokyo Vula 7: 00 PM 0: 00
Tokyo Vala 4: 00 AM 9: 00
London Vula 3: 00 AM 8: 00
Vala London 12: 00 PM 17: 00
New York Vula 8: 00 AM 13: 00
New York Vala 5: 00 PM 22: 00
With ikhono ukudayisa ngesikhathi Asian, US, futhi European session amahora, ungakwazi ngezifiso uhlelo lwakho zokuhweba. Ungasebenza kancane noma okuningi, uhwebo emini noma ebusuku, futhi sithathe isikhathi okungukuthi ngokunethezeka ngawe noma wakho isu.
Ngokuvamile ukukhuluma, amasheya kanye izimakethe ikusasa kukhona tradable at amahora athile osukwini, ngokuvamile phakathi namahora okusebenza Ukuhwebelana abafanele elise NYC (9-5 EST) noma Chicago (8-4 CST), ngamunye emileyo esingaphansi 7 amahora. Ngaphandle kwalezi amahora, ngokuthi pre noma ngemva-emakethe amahora, omunye usengakwazi ukudayisa kwamanye Ukuhwebelana ngogesi, kodwa ivolumu kanye zezimali liye landa tapered off, okwenza amathuba ukuhweba okuyingozi ngaphezulu ngenxa slippage anda. Ngenxa ivolumu kancane kangcono phakathi Ukuhwebelana amahora okusebenza, sivame belulekwa ukudayisa ngesikhathi amahora zokusebenza New York (US amasheya) noma Chicago (for Futures). Kungezwe lokhu umkhawulo, abadayisi kufanele ukubhekana nale nkinga yentengo izikhala ezenzeka ngenxa lokuvala njalo nokuvulwa izimakethe zabo kanye nomehluko kulandela (noma igebe) e amanani phakathi eduze futhi evulekile, ikakhulukazi phakathi ngobusuku obubodwa izimemezelo izindaba: Ngokwesibonelo, uma intengo isabelo ifinyelela eliphansi $ 35 ngoMsombuluko futhi ivula at $ 30 ngoLwesibili, ukuthi kuyinto $ 5 phansi intengo igebe, kuhle abahwebi iDemo abembambile ezikhundleni zawo ngobusuku obubodwa, kodwa kuyingozi abahwebi eside. Lezi izikhala intengo nakho kungaba inkinga itulo komuntu ukuhlaziywa lobuchwepheshe ngoba zonke izinkomba kanye oscillators babe etshekile kulezi izikhala.
Long / Ukuvumelana nezimo elifingqiwe: singazuza Bobabili Bull Futhi Bear Izimakethe
Abanye abathengisi, ikakhulukazi labo abadayisa kuphela amasheya, bacabanga ukuthi bangenza imali kuphela lapho imakethe ikhuphuka. Emakethe ye-FOREX unamathuba okwenza imali lapho imakethe ikhuphuka noma iphansi. Uma ucabanga ukuthi imakethe izokuya phezulu uhamba isikhathi eside (ukuthenga) futhi uma ucabanga ukuthi imakethe iyahla, uyaphuza (uthengise). Kube khona abathengisi abathile abathanda njalo emakethe ukuba bakhuphuke, kanye nabanye abathengisi abahlale bekulindele ukuthi imakethe yehla. Kungcono ukukwazi ukuhweba imakethe noma yiziphi izimakethe, okwenza kube namathuba amaningi. Imali oyenzayo noma yokulahlekelwa ibalwa ngendlela efanayo. Umehluko phakathi kokukhokha kwakho nokuthi yini othenge ngayo imali. Kungakhathaliseki ukuthi uthengisa kuqala futhi uthenge kamuva, noma ukwenze ngenye indlela, akunandaba.
Njengoba kukhona izinhlobo zemali eminingi ukuthi kungenziwa adayiswa, kukhona cishe njalo abanye uhamba oluyingozi. Akunandaba uma izindaba kuhle noma kubi ngoba singakwazi, futhi ngeke, bakwazi ukudayisa kwabo bobabili. ' Izikhukhula, indlala, isomiso, izimpi, zezinguquko kwezombusazwe futhi nenkohlakalo, kanye nokunyakazisa umnotho, noma ukungabi, zenzalo, ukuwa kwamandla emali, deflation zonke sinomthelela ngenzuzo elinganiselwe zezimali ezimbili. Kungase kube nokungafani kwemibono nje lokho umthelela phezu lwemali kungase kube, kodwa kuyohlale abanye simo esishubile.
Kungenzeka futhi nge zezimali, kanye nabanye wabathengi ukuthi uyivumele, ukudayisa eside futhi esifushane currency efanayo ngesikhathi esifanayo, ngokuthi hedging. Hedging amakhono ungaba ambalwa izinzuzo, eyodwa ngaphezulu abahlukene kunamanye. Enye inzuzo sobala ukuthi ungavumela ikhasimende ukuba unqume ukuthi ukuvala ukuhweba noma offset ukuhweba ukunciphisa ingozi. Nokho, lokhu kuba ngaphansi inzuzo uma ucabangela ukuthi ngabe ukuvala ukuhweba noma offset nomunye kolunye uhlangothi, iyona nenzuzo nokulahlekelwa nse, futhi ukhokha kabili njengoba lisakazeka kakhulu ngoba wenza imisebenzi emibili. A inzuzo ezithakazelisayo ngaphezulu hedging wukuthi ungakwazi ukudlala amasu amaningi akhawunti efanayo, ku currency efanayo, futhi ngoba ngezinye izikhathi umuntu wakho isu kungase kube isikhathi eside lapho yesibili iqalisa emfushane, ungafuni ukuphoqelelwa ukuba uvale eside yakho isu isikhundla uma uye awukaqedi iqhinga yayo, noma ingabe ufuna ukhawule yesibili angene esikhundleni salo. Ufuna ukuvumela kokubili izikhundla eside futhi esifushane ukungena kanye uphume setups zabo ngendlela yabo, bangaphazanyiswa ngaphandle emithethweni anti-hedging. Futhi, ezinye zezindlela noma EAs zincike ikhono uthango noma ingxenye uthango njengenhlangano isici ebalulekile impumelelo yabo kanye nokwenza inzuzo, futhi ngakho-ke abadayisi zokufuna ukusebenza EAs ezinjalo kufanele bafune broker nge amakhono hedging.
Ngo Forex kunjengoba nje kulula ukuthatha isikhundla okufutshane njengoba kuba ukuthatha isikhathi eside. Njengoba zezimali adayiswa ngababili, lwemali ngasinye ontengo yakhe yayinqunyiwe ngokuya komunye, ethengisa letimfisha pair lwemali efanayo uya eside esitokisini.
Kodwa emakethe yamasheya kunemingcele ebekwe ekudayiseni okufutshane. E-US, abathengisi abancanyana babekwa icala ngenxa I-Wall Street Phahlaza ka 1929 nokunye imithetho kahulumeni zabekwa lokuvala nabathengisi emifushane ukuthengisa amasheya ngesikhathi downtick, okuyinto yaziwa ngokuthi umthetho uptick (okuyinto evimbela abahwebi kusukela shorting isitoko ngaphandle uma ukuhweba ngokushesha okwandulela zazilingana noma ngaphansana intengo ukudayiswa okufutshane ). Lowo mthetho eqale ukusebenza kusukela 1938 kuze Julayi 3, 2007, ngesikhathi isuswa SEC (SEC Ukukhululwa Cha 34-55970). Muva nje, ngo-Septhemba 2008, ethengisa iDemo livele kunomthelela ekuweni emakethe, futhi wawuwuvimbele SEC I-799 izinkampani zezimali amasonto amathathu emzamweni usimamise lezo zinkampani. Ngisho ngaphandle uhulumeni imikhawulo zokulawula, akubona bonke amasheya atholakala ukuba shorted, le broker has ukukwazisa imiphi, kodwa nalapho, akubona bonke abatshali bemali yokufaneleka wekhasi ukuboleka zabo broker lemfishane isitoko.
Esitokisini, kubalulekile ukuphawula ukuthi ukuthengisa iDemo ithwala ingozi ezingaphezu kuka ngidayisa eside. Ngo uya eside, ukulahlekelwa anqunyelwe (intengo bangenza phansi zero), kodwa izinzuzo angenamkhawulo; ngamafuphi-ukuthengisa, lokhu siyachithwa, uzuza kungenzeka anqunyelwe (stock bangenza phansi intengo ka-zero), futhi umdayisi ungalahlekelwa ngaphezulu kwenani yokuqala share, ngoba akukho mkhawulo. nabathengisi iDemo kumelwe futhi ukuqaphela ukuthi kukhona okungalunga basiqinise iDemo.
Lapho uhweba i-FOREX, izindleko zingaphansi. Abathengi abaningi abakhokhisi amakhomishana, kodwa kunalokho, gcina ububanzi (okuthiwa "basakazeka") phakathi kwebhizinisi futhi buze amanani, okungaba okuncane kakhulu kumabhanisi amakhulu wezimali, kusuka kuma-pips we-2-5. Uma bekhokha ikhomishana, njengalabo ECN nomdayisi, le abadayisi ngokuvamile ithola jikelele aphansi kuthengiselana izindleko ngenxa ukusabalala ziyancipha kakhulu.
Amasheya Nama-futures, ngokuphambene, ukushaja ikhomishana zonke ukuhweba kanye nokuhweba njalo bangaba ngempela eqolo. Isaphulelo wabathengi inthanethi oyifakile ku zamuva ukuze ngokuncintisana ukunciphisa ikhomishini ngezindlela okukhulu isihlobo ukuba zezitini nodaka njalo wabathengi (ukushaja njengoba low $ 4 ngayinye isitokwe ukuhweba esikhundleni $ 20, ngokwesibonelo), kodwa ngisho wemisebenzi yabo ephansi kakhulu ayikwazi ancintisane yokuncintisana ukusabalala / ikhomishana nokubiza forex wabathengi.
Nokho, kuyathakazelisa ukuthi ngoba izindleko kuthengiselana Forex kuyinto pro rata usayizi okuningi esetshenziswa, kubuye kube fair ngaphezulu futhi senziwe njalo. Ngokwesibonelo, uma adayiswa 1 okuningi micro GBPUSD ngokusabalalisa kwama-pips we-4, izindleko zakho zokuthengiselana kungaba ngamasenti angu-40 kuphela (ama-4 pips X 0.10 amenti). Yilokho kuphela. Noma yikuphi ukuthengiselana kwamasheya noma ikusasa, ngisho nokuthengiselana okuncane kakhulu, kuzodingeka kube okungenani izikhathi ezingu-100 leyo mali (iminithi ye-$ 4), bese uthola kuphela lokho "izindleko" ekuthengisweni kwe-brokerage ejulile e-intanethi.
A inzuzo elikhulu Forex wukuthi awudingi imali okukhulu capital ukuqala nokuhweba. wabathengi Iningi kuzokuvumela ukuvula i-akhawunti bese uqale ngidayisa nge esingaphansi $ 500 USD, nge eziningi asivumi ukuba ufake njenge- $ 50.00. Ngakho forex awunankinga ngenxa yokuqhuba ezincane abadayisi.
Qhathanisa lokhu ongaphakeme ofeleba imfuneko ukunotha virtual kudingeka ahwebe ngamasheya noma ikusasa. Bavumela uvula akhawunti nge njengoba low $ 2000, kodwa ngenxa engaguquki isikhundla sokubheka ubungako nezinketho asizakale engaguquki, uyobe ukuthatha isengozini enkulu kakhulu ukuhweba nalo ngobukhulu akhawunti ubuncane. Kungaba ephephile ukudayisa mkhulu kunezinhliziyo $ 10,000 nge amasheya noma $ 100,000 nge ikusasa, njengoba sizobona ngezansi.
Thola Nezimo ULothi Sizes
Bobabili Amasheya Nama izimakethe ikusasa zidinga ezifakwa ezishisiwe kokuqala ukudayisa wayithwala ngokuphepha, unikezwa asizakale kwabo esinqunyiwe kanye eningi Sizing.
Ezingongolweni emakethe, ngoba wabathengi kakhulu ukuvumela kuphela ukuthenga izikhubekiso of 100 ukwabelana, ungadinga usayizi esikhulu kokuqala akhawunti ukuze ahwebe ngamasheya ukuthi ontengo yakhe yayinqunyiwe at $ 25 noma ngaphezulu ngokuphepha. Ngokwesibonelo, kusukela ngo-wabathengi kakhulu ukuvumela kuphela eyodwa ukuthenga izikhubekiso of 100 ukwabelana, uma uthenga 100 ukwabelana ABC Inkampani for $ 50 isabelo ngasinye, ungadinga $ 5000 ($ 50X100) ukudayisa ukuthi inkampani. Ngezinye 1: 1 asizakale (ngaphandle kwemali), nanoma ikuphi ukwehla intengo stock sika by 10 zamadola lungamelela ukulahlekelwa 20% of isikhundla sakho ($ 10X100 = $ 1000). Futhi uma ukuboleka ku wekhasi, ngesikhathi 2: 1 asizakale, nibekezelelana $ 2500 ukuze ukuthenga isitokwe ke uma isitokwe uwela 10 zamadola kusuka $ 50 ku- $ 40, wawuyobe ulahlekelwe $ 1000 ka yakho $ 2500 kokuqala ( okuyinto lungamelela ukulahlekelwa 40%), kanye iconsi eminye malini Usengozini yokuthola ucingo margin kusuka wakho broker ukubeka ngaphezulu izibambiso noma imali ku-akhawunti ukubuyisela ibhalansi 50 amaphesenti.
Emakethe yekusasa, ukuphakama kuphakeme kakhulu kunamasheya, futhi ngenxa yokuthi inqwaba noma ubungakanani bekhontrakthi iphinde isetshenziswe, lokhu kuphakama okukhulu kukhulisa ingozi futhi ngaleyo ndlela kudinga ubuningi be-akhawunti ezinkulu ukuze kuwuhwebe ngokuphepha. Isibonelo, inkontileka eyodwa yegolide yesikhathi esizayo (ye-$ 4000 margin) ilawula ama-ounces we-100 troy; Ngakho-ke, uma igolide lihweba ngo-$ 1200 / ounce, inani lenkontileka yi-$ 120,000 ($ 1200 X 100 ounces), okwenza kube yi-30: 1. Ngokwamaphuzu, i-1 iphuzu = $ 100. Ngenxa yokuthi inkontileka ihlanganiswe naleso silinganiso esikhulu nenani lamaphuzu, unamathela okuyingozi nokungaqondakali. Udinga i-akhawunti izikhathi eziningana kakhulu kunomkhawulo wakho ukuze umelane ne-gold vacillation yamasonto we-100 (amaphuzu we-100 X $ 100 = $ 10,000). Uma igolide lihambelana nesimo sakho, i-$ 10,000 yakho ingasakaza phakathi kwezinsuku ezimbalwa. Uma ikusasa abadayisi wafuna ukudayisa ngemali encane futhi ingozi, inketho yakhe kuphela kungaba ukudayisa igolide inkontileka mini (33.2 awunsi esikhundleni 100; 1 iphuzu = $ 33) ngesikhathi exchange e-CBOT, okwakuyoholela ukunciphisa asizakale yakhe futhi ingozi ngumuntu wesithathu nakuba 100 iphuzu kumelana isikhundla sakhe bekusayoba ukumela $ 3000 umonakalo ezishisiwe. Futures abahwebi izivumelwano mini igolide kwakuzodingeka phezu $ 50,000 bakwazi ukumelana uchungechunge abathengisa ukulahlekelwa.
Njengoba kokubili ukuguquguquka okuguquguqukayo KANYE nokuguquguquka kwezinga eliguquguqukayo, i-Forex ingavulelwa ngezindleko ezincane zemali yokuqala futhi ihwetshwe ngokuphepha ngamasayizi amancane. Isibonelo, uma ngabe u-$ 1000 kuphela ozotshala imali, uzovula i-akhawunti ye-brokerage encane nge-200: 1 ukuphakamisa, futhi nakuba ungase uhwebe izikhathi ezingu-200 inqwaba yakho, noma izinkampani ezijwayelekile ze-2 (i-1 standard standard = $ 100,000; 2 inkatho evamile = i-$ 200,000), into ehlakaniphile yokwenza kuyoba ukuhweba ubungako besilinganiso esincane, i-1 inkatho encane (0.01 = $ 1000), okwakungenzeka ukuthi isebenzise ukulinganisela okungenani. Yebo, ukuphakama kwe-zero. Isizathu salokhu ukuthi lezo zimali ngokuvamile zichitha ama-pips angu-100 noma ngaphezulu, futhi omunye angakwazi ukusingatha kalula ukunyakaza kwe-pipeline ye-100 ngokumelene nesimo sakho ngokuba usuvele wehlile ukubaluleka kwebhoyi ngokusebenzisa ukulinganisa okuningi. Ngenxa yokuthi i-1 pip esebenzisa i-standard standard ilingana ne-$ 10, ukunyakaza okungekho kwe-100 kuyomelwe ukulahlekelwa i-$ 1000 (ukusula yonke i-akhawunti yakho uma ngabe uyisimungulu ngokwanele ukusebenzisa leyo ndlela!). Kodwa-ke, uma usebenzisa ubukhulu bezinhlamvu ze-0.01 (i-1 pip usebenzisa i-micro lot ibiza i-$ 0.10), ukunyakaza okungahambi kahle kwe-100 kuzomelwe ukulahlekelwa kwe-$ 10 kuphela (nje ukuqala, ukulahlekelwa kwe-1% kwe-akhawunti yakho). Kulesi simo, uzokwazi ukumelana nochungechunge lokulahlekelwa ngamabhizinisi futhi ube namanje emdlalweni, ngokungafani nezimakethe zesikhathi esizayo lapho i-akhawunti yakho izobe ivele igubha khona. Ukuphakama okungenzeka okungenzeka kwe-400: I-1 ingabekwa eceleni uma kwenzeka ithuba elihlukile noma oluphuthumayo, njengoba sizoxoxa kwezinye izingxenye.
FX Izinzuzo Ngo Sum
Forex ikuvumela ukuba akhiphe okusheshayo nangokunembile (ngaphakathi imvelo kakhulu ketshezi), ukuhweba 24 amahora ndlela eside futhi esifushane lisakazeka ongaphakeme kanye / noma ikhomishini, abanesifiso kokusebenzisa ephephile kakhulu futhi nezimo sokuqala amanani, eziningi osayizi kanye asizakale. Amasheya Nama-futures, ngokuphambene, abe kude encipha ukuhweba iwindi ngokuya ukuhweba amahora isiqondiso, nge amathuba kakhulu ngokubulawa ukubambezeleka, slippage futhi intengo zokukhwabanisa, abathengisa kuyabiza ngokuya ikhomishini, futhi okuyingozi ngaphezulu ngokuya fixed amanani starting yabo, eziningi osayizi kanye asizakale.
I-Wall Street Phahlaza